Unyaka omubi kwezokujabulisa kuleli | News24
Unyaka omubi kwezokujabulisa kuleli
Johannesburg – Kukho konke ukujabula nempumelelo onyakeni, unyaka wango-2015 ubungunyaka wezinyembezi kwezokujabulisa eNingizimu Afrika njengoba kudlule osaziwayo abaningi kuyo.
Ukudlula kwalabosaziwayo kushiye isilonda esikhulu ezinhlizweni nasezingqondweni zethu.
Unyaka wango-2015 usithathele lezi zihlabani:
Abalandeli beqembu lomculo iSkwatta Kamp basala beshaqekile ngoMashi kulo nyaka ngesikhathi bezwa ezibuhlungu zokudlula emhlabeni kukaNkululeko "Flabba" Habedi owagwazwa wabulawa yintombi yakhe emzini ose-Alexandra.
Ngomhlaka-31 Januwari sashiywa ngumethuli wohlelo lakumabonakude iTop Billing, uSimba Mhere owathathwa yingozi yemoto, yena nomngani wakhe omkhulu uKady-Shay O’Bryan.
Inyanga kaJulayi yafika nayo nezayo ezimbi njengoba kwadlula emhlabeni inkakha yezomculo wombhaqanga uDavid Masondo owayecula phambili kwiSoul Brothers. UDavid Masindo wadlula emhlabeni ngemuva kokulaliswa esibhedlela amasonto ambalwa ngenxa yokukhathala. Ngaleso sikhathi wayeneminyaka engu-67 ubudala.
Mmmmh....Kungakapheli zinyanga ezingakhi kwadlula isihlabani somculo weKwaito uR Mashesha weBig Nuz ngemuva kokugula isikhathi eside.
Hhayi ukudlula kwaprojusa uProsper akugcina ngokushaqisa abaningi kodwa kwavela izinxushunxushu eziningi kulandela ukudlula kwakhe emhlabeni ngenxa yemibiko yabezindab ngabantu besifazane ababili uTina Jaxa noTina Mkwaiwa kubangwa imphahla yakhe.
Ohhe ukudlula kukaTiki "Sompisi" Nxumalo owayelingisa kwiGenerations owasishiya emhlabeni ngoJuni kwababuhlungu kakhulu. UTiki watholwa edindilize phansi ethule emzini wakhe oseThekwini kanti ngaleso sikhathi abomndeni basola ukuthi wayezama ukuyofuna usizo ngesikhathi eya phansi. UTiki wadlula eseneminyaka engu-65 ubudala emhlabeni aknti ubengenazo izingane.
Ukudlula emhlabeni kwenkakha yokulingisa nomculo uSenyaka Kekana kwababuhlungu. Ngokusho kwemibiko yabezindaba uSenyaka waphuthunyiswa esibhedlela ngemuva kokukhala nge-sinus wabe eseshona ngemuva kwesikhashana engenile esibhedlela.
Awu kodwa ngenkakha yokulingisa eyadlula emhlabeni ngo-Agasti uRoland Mqebu owayedlala Emzini Wezinsizwa kumabonakude edlala indawo kaMkhize. Ukudlula kwale nkakha kwashaqisa abaningi kuleli ababengaphuthwa ukumbuka komabonakude babo.
UMqwebu walandelwa ngabanye ozakwabo ababili ayedlala nabo Emzini Wezinsiwa uMagubane owayeyinyanga ogamalakhe lokuzalwa nguShadrack Ngema noBafana Mlangeni owayedlala indawo kaSibeko.